सुकुमेलकाे प्रयाेग गर्न जान्ने हाे भने शरिरलाई हुन्छ यति धेरै फाइदाहरु — Imandarmedia.com
सुकुमेलकाे प्रयाेग गर्न जान्ने हाे भने शरिरलाई हुन्छ यति धेरै फाइदाहरु
काठमाडाैँ । सुकुमेलकाे प्रयाेग गर्न जान्ने हाे भने शरिरलाई हुन्छ यति धेरै फाइदाहरु ! सुकुमेल स्वादका लागि मसलाको रुपमा मात्रै होइन स्वास्थ्यका लागि औषधिको रुपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । सुकुमेलमा भरपुर औषधीय गुण हुनेगर्दछ ।
सास गनाउने गरेको छ भने मुखमा सुकुमेल हाली समय लगाए चुस्ने गर्नुस् । यसमा पाइने सुगन्धले सासलाई ताजा राखी दु-र्गन्ध हटाउँन मद्दत गर्दछ । भोक नलाग्ने, बान्ता हुने, अपच हुने आदि समस्या छन् भने सुकुमेल खानाले कम हुन्छ । तिर्खा लागिरहन्छ अथवा घाँटी पोल्ने गरिरहन्छ भने सुकुमेल मिसाइएको पानी पिउँदा राम्रो हुन्छ ।
छातीमा कफ जमेको छ र सास लिन गाह्रो भइरहेको छ भने सुकुमेल खानाले कफ बाहिर निस्कन्छ र शरीरलाई राहत मिल्छ । रुघाखोकी लागेको छ अथवा घाँटी खसखस भइरहने समस्या छ भने सुकुमेललाई पिसेर महसँग खानुपर्छ ।सुक्खा खोकी लागेको छ भने सुकुमेल, तोरीको तेल र चिनी मिसाएर खानुपर्छ । यसले कफ बाहिर निकाल्न मद्दत गर्छ । ज्वरो आएर जीउ पोलेको छ भने सुकुमेल खानाले सहज महसुस हुन्छ ।
याे पनि, घरपरिवारमा सुख शान्ति र धनदौलतको कमी नहाेस् भन्ने चाहानुहुन्छ भने सॉझ परेपछि भुलेर पनि यी काम कहिल्यै नगर्नुहोस ! हिन्दु धर्म शास्त्र अनुसार यी काम सूर्यास्तपछि कहिल्यै गर्नु हुँदैन । पौराणिक कथा र ज्योतिष शास्त्रमा कयौँ यस्ता कुराको दावी गरिएको छ जसलाई आजका मानिसपनि मान्ने गर्दछन् । यस्ता कार्य राति गरेमा लक्ष्मी माता रि-साउनु हुन्छ भन्ने मान्यता रहेकाे छ:-
१) शंख नबजाउनुहोस्:- घरमा राखिने शंखमा सधै धनकी देवी लक्ष्मीको बास हुने गर्दछ। हाम्रा पूर्खाका अनुसार सबैले घरमा शंख राख्न जरुरी छ। परन्तु यो कुरा ध्यान दिन जरुरी छ की रात परेपछि शंख बजाउन हुँदैन्। साँझमा शंख बजाउँदा धन हानी हुने सम्भावना हुने गर्दछ।
२) राति कपडा धुनु हुँदैन:- मान्यता यो छ कि राति कपडा धुनु हुँदैन। भनिन्छ राति कपडा धुँदा र त्यसलाई सुकाउँदा कपडामा नेगेटिभ एनर्जी प्रवेश गर्दछ। यस्तो कपडाबाट तपाईंको मनमा नकारात्मक असर पर्दछ । कपडा साँझसम्म नसुके त्यसलाई राति छतको तल फैल्याउनुहोस्।
३) राति बिना केसर वा बेसार दूध नपिउनुहोस:- अर्को मान्यता यो छ कि राति दूधमा थोरै बेसार या केशर मिलाएर पिउनु पर्दछ । केही नमिसाई नखानुहोस् । किनकी दूधको प्रकृति चिसो हुन्छ र सादा दूध राति झनै चिसो हुन्छ । यसले तपाईंलाई सर्दीको समस्या हुन सक्छ । तपाईं विरामी हुनुभए लक्ष्मी तपाईंबाट टाढा हुनेछिन् ।
पाइल्स किन हुन्छ, कसरी समाधान गर्ने ?
आलुको बोक्रा फाल्नेले यो पढ्नैपर्छ, अनि पो थाहा हुन्छ खास कुरा
बिहे गर्छन् तर यौनसम्बन्ध राख्दैनन्, विवाहित दम्पतीको व्यवहारले सरकारलाई संकट
टिकटकमा नयाँ फिचर, अब किशोरकिशोरीहरु ढुक्कले सुत्न पाउने
पहिलो भेटमा पुरुषहरू किन महिलाका यी अंगहरूमा बढी ध्यान दिन्छन् ? यस्तो छ रहस्य
यि हुन् केही घण्टामै क्यान्सर ठीक पार्ने चमत्कारिक औसधी
किन बदल्नु जरुरी छ सोंच, व्यवहार र कार्यशैली ?